श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने? (भिडियो सहित) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/श्वेताका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, श्रीकृष्णको फोटो बेडरुममा राख्ने कि नराख्ने? (भिडियो सहित)
मैले सुरु गरेको जिन्दगीको यो अर्को अध्यायमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ । मैले नेपाली सिने जगतलाई मेरो शिरको सिन्दुर जस्तै अझै उच्च स्थानमा पुर्‍याउनु छ । निर्माणाधिन माझिटोललाई आज सँजिएको बिहेको मण्डप भन्दा पनि अझै सजाउनु छ । मैले थालेका ब्यावसायहरुलाई मेरो हातमा चम्किएका चुराहरु जस्तै चम्काउनु छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
गरिब बाबुकी यी सानी नानीलाई आँखा’को क्या’न्सर भयो; बचाइदिन सबैसँग आग्रह (भिडियो सहित)
अब औसधिको लागीपनि पैसा सकियो, कन्चनको मम्मी रुदै मिडियामा, अब के हुन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो)